ကလေးဘဝကတည်းက ဘုရားတရားသိတတ်ပြီး သူမနဲ့ စိတ်ချင်းတူတဲ့ သမီးငယ်လေးကြောင့် အရမ်းပီတိဖြစ်နေရတဲ့ သက်မွန်မြင့် - Myannewsmedia
By nay htooPosted on January 26, 2021
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ အခုလို ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဘုရားတရားကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်က သူမရဲ့ သားသမီးတွေကိုလည်း အခုလို ကလေးဘဝကတည်းက ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းစေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေးကလည်း သက်မွန်နဲ့အတူ တရားထိုင်လေ့ရှိတာကတော့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုမိစေမှာပါ။
သက်မွန်က မကြာသေးတဲ့ နာရီပိုင်းအချိန်လောက်က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာ သမီးလေးနဲ့အတူ တရားထိုင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေအပြင် ” တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသလိုပေါ့…၉ ရက် တရားစခန်း( အိမ်ကနေ zoomနဲ့) ဝင်တော့ သူလိုက်ထိုင်တာ.. သက်မွန်ကိုယ်တိုင်လည်း မေမေက ဘုရားတရား အရမ်းလုပ်တော့ ကိုယ်ပါ စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ဖြစ်တယ်.. ကလေးဘဝထဲက မေမေ ပုတီးစိပ်ရင် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ပြီး မေမေသင်ပေးတာ လိုက်လုပ်တာ..အနုပညာ အလုပ်စ လုပ်တော့လည်း ဘုရားမှ တပါး အားကိုးရာ မရှိခဲ့တော့ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်..
ခု အလုပ်မလုပ်ရတော့ အိမ်မှာ နေရတဲ့ချိန် အိမ်ကနေ တရားစခန်းဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ဝင်ဖြစ်တယ်… ဆရာ ကေသာဦးရဲ့ သဲအင်းဂူ “သေနည်းသင်”ဆိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတာ.. သေမလိုဖြစ်တုန်းက စိတ်တွေယောက်ယက်ခတ်ခဲ့တာကိုး.. ဝေဒနာနဲ့ စိတ်ကို ဘယ်မှာ အာရုံပြုရမလဲဆိုတာ သိချင်နေခဲ့တာ.. ခုတော့ သိပြီ.. ကိုယ် ဆက်ပြီး ကျင့်ကြံသွားဖို့ပဲ လိုတော့တယ်. ကျင့်သားမရရင် ယောက်ယက်က ခတ်ဦးမှာပဲ ” ဆိုပြီး ရေးသားလာတာပါ။ သက်မွန်နဲ့ ရုပ်ဆင်ရုံသာမကပဲ စိတ်ဓာတ်လေးပါ တူနေတဲ့ သမီးငယ်လေးနဲ့အတူ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေထံ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါတယ်နော်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Thet Mon Myint’s Facebook Page
သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး သကျမှနျမွငျ့ကတော့ အခုလို ကိုဗဈရောဂါတှကွေောငျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှု အားလပျခြိနျတှမှော ဘုရားတရားကို တစိုကျမတျမတျလုပျကိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျက သူမရဲ့ သားသမီးတှကေိုလညျး အခုလို ကလေးဘဝကတညျးက ဘုရားတရားကိုငျးရှိုငျးစတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အငယျဆုံးသမီးလေးကလညျး သကျမှနျနဲ့အတူ တရားထိုငျလရှေိ့တာကတော့ ပရိသတျတှကေို အခဈြပိုမိစမှောပါ။
သကျမှနျက မကွာသေးတဲ့ နာရီပိုငျးအခြိနျလောကျက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ ဖဘှေ့တျအကောငျ့မှာ သမီးလေးနဲ့အတူ တရားထိုငျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို ဝမြှေလာတာဖွဈပါတယျ။ ပုံလေးတှအေပွငျ ” တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသလိုပေါ့…၉ ရကျ တရားစခနျး( အိမျကနေ zoomနဲ့) ဝငျတော့ သူလိုကျထိုငျတာ.. သကျမှနျကိုယျတိုငျလညျး မမေကေ ဘုရားတရား အရမျးလုပျတော့ ကိုယျပါ စိတျနှဈပွီး လုပျဖွဈတယျ.. ကလေးဘဝထဲက မမေေ ပုတီးစိပျရငျ စိတျဝငျတစား ကွညျ့ပွီး မမေသေငျပေးတာ လိုကျလုပျတာ..အနုပညာ အလုပျစ လုပျတော့လညျး ဘုရားမှ တပါး အားကိုးရာ မရှိခဲ့တော့ ပိုလုပျဖွဈတယျ..
ခု အလုပျမလုပျရတော့ အိမျမှာ နရေတဲ့ခြိနျ အိမျကနေ တရားစခနျးဝငျလို့ရတယျဆိုတော့ ဝငျဖွဈတယျ… ဆရာ ကသောဦးရဲ့ သဲအငျးဂူ “သနေညျးသငျ”ဆိုတော့ ပိုစိတျဝငျစားသှားတာ.. သမေလိုဖွဈတုနျးက စိတျတှယေောကျယကျခတျခဲ့တာကိုး.. ဝဒေနာနဲ့ စိတျကို ဘယျမှာ အာရုံပွုရမလဲဆိုတာ သိခငျြနခေဲ့တာ.. ခုတော့ သိပွီ.. ကိုယျ ဆကျပွီး ကငျြ့ကွံသှားဖို့ပဲ လိုတော့တယျ. ကငျြ့သားမရရငျ ယောကျယကျက ခတျဦးမှာပဲ ” ဆိုပွီး ရေးသားလာတာပါ။ သကျမှနျနဲ့ ရုပျဆငျရုံသာမကပဲ စိတျဓာတျလေးပါ တူနတေဲ့ သမီးငယျလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှထေံ ပွနျလညျတငျဆကျပေးပါတယျနျော။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Thet Mon Myint’s Facebook Page
Previous post လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၅၀)ကျော်လောက်က ဖေ‌ဖေနဲ့မေမေ့ရဲ့ အရမ်းဂေါ်နေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ပြလာတဲ့ ဆန်းထွဋ်
Next post ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ထားပြီး စိုးပြည့်နဲ့အတူသီဆိုထားတဲ့ ပျော်စရာစုံတွဲသီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ကို ချပြတော့မယ့် မိုးမိုး